उज्ज्वल जी.सी., (काठमाडौँ)
अफिसमा केही कर्मचारीहरुको बढुवा भएकोले उषाको मुहार ज्यादै मलिन देखिएको छ । अरुबेला हाकिम साहेबसँग जिस्कने ऑंखाहरु आज ऑंसुले टन्न भरिएर टोलिन थालेका छन् । सबै साथीहरुको बढुवा भई बिना कारण उनको मात्र रोकिन जानुले मनभित्र गहिरो पीडाहरु छाएको मौन ऑंखामा प्रष्ट देखिन्छन् ।
भनसुन र चाकडीको सूत्र प्रयोग गर्न पनि उषा अरु कुनै कर्मचारीभन्दा कम थिइन । हाकिमलाई खुसी बनाउन लाए अह्राएको जुनसुकै कामकाज पनि ऊ लगनशीलताकासाथ गर्थी । अझ कुनैबेला आफ्नो नरम पिठिउतिर हाकिमले हात बिसाउंदा समेत कुनै असजिलो संकेत प्रकट नगरी हॉंसेर नै स्वीकार्थी ।
उनको कमजोरी अर्थात् अवगुण भन्नुमा एउटै थियो– जुन हाकिमको मातहतमा बसी काम गर्यो, उसको गुणगान जपि अरुको चुक्ली लगाउने ।
वास्तवमा भन्ने हो भने चाकडी र चुक्लीकै भरमा उनले दुई,तीनजना आफ्ना नातेदारलाई अफिसमा घुसाइसकेकी छे । हाकिमसाहेबको मुडलाई विश्लेषण गर्न पोख्त भएकीले कुन समयमा कस्तो काम पट्याउने भन्ने राम्ररी थाहा थियो– उनलाई ।
आफ्नो स्वास्र्थपूर्तिका लागि हाकिमसामु कुनैबेला घरका दुःखेसोहरु पोख्दै रुनु र कहिले इज्जतको सीमाबाट दुई फड्को मारी जिस्कनु उनको लागि स्वाभाविक थियो ।
जे होस्, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि ढल्किदिन सक्ने क्षमता भएकोले समय–समयमा अफिसमा हुने कक्टेल पार्टीमा रक्सीको साथ उषाको हृदयस्पर्शी मुस्कान आवश्यक पथ्र्यो– हाकिमसाहेबहरुलाई ।
घरको आर्थिक अवस्था ज्यादै दयनीय भएकोले उषालाई आफ्ना दुईजना छोराछोरीका पढाइ शुल्क र लुगाफाटाहरु समेत टार्न पुग्दैनथ्यो–मासिक तलबले । त्यसैले उनी हरसम्भव हाकिमकै खेलौना बनी आफ्ना समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्थी ।
जागिरे लोग्ने भए पनि उनलाई कुनै आड भरोसा थिएन । लोग्नेसँग महिनावारी तलव लिनुको सट्टा उल्टो समय–समयमा बीस,तीस रुपियॉं अफिस जाने बेला खर्च दिनु पथ्र्यो उनले । जतिसुकै सम्झाए,बुझाए पनि रक्सी पिउने आदतलाई उनको लोग्नेले छोड्न सकेको थिएन । सधै बेलुकी १०/११ बजे रक्सीले धर्मरिदै आउने क्रमले वाक्क भएर उषाले लोग्नेलाई मर्यादाको रेखाबाट धेरै तल राखिसकेकी थिई ।
त्यसैले अफिसमा हाकिमको नजिक बनेर दुई पैसा आम्दानी गर्न उनलाई लोग्नेको कुनै संकोच लाग्दैनथ्यो ।
हुन त थुप्रै कर्मचारीले भित्रभित्र उनको बारेमा नाना थरिका कुराकानी गरेर पनि खुल्ला रुपमा दोषहरु औंल्याउने कसैको हिम्मत थिएन । उनको विरोधमा दुई शब्द मात्र हाकिमले सुने भने भोलि जागिरको म्याद समाप्त हुन्छ भन्ने त्रासलाई सबैले ज्यूदो बनाएर राखेका थिए ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि उषाको बढुवा रोकिनु एउटा आश्चर्यको विषय बनेको थियो – अफिसका सारा कर्मचारीलाई । उनको बढुवा किन कसरी भएन भनेर सबैले आ–आफ्नै तर्क दिन्थे । कसैले–‘नक्कली सर्टिफिकेट भएकोले बढुवा भइन’ भन्ने अनुमान लगाउँथे त कसैले–‘शक्तिको पुजारी मात्र भएर के गर्नु ? कुन कुराले हाकिमको चित्त दुखाई मोरीले ? तर जे होस् बढुवा भएको भए राम्रै हुन्थ्यो ।’ भन्थे ।
आ–आफ्नो अडकल सबैको थियो तर यथार्थको धरातल भेट्टाउन कसैले सकेका थिएनन् ।
छातीमा पीडा बोकेर केही दिन बिताइ उषाले ।
हाकिमसाहेब विगतमा भन्दा अझ राम्रो व्यवहार गर्थे उनीसँग । आफ्नो बढुवा नहुनुको कारण सोद्धा ‘कुरा धेरै गहिरो छ । तिमीले अझै बुझेकी छैनौ । चुप लागेर बस न केही महिना !’ भन्ने जवाफ आउंथ्यो– हाकिमसाहेबको । त्यसैले तथ्य कुरा थाहा पाउन उनी एक सॉंझ आफ्नो सम्बन्धित हाकिमसाहेवको घरमा पुगी– नौ सय पर्ने रेडलेवलको बोतल लिएर ।
शनिवारको दिन भएकोले हाकिमसाहेब रक्सीको चुस्कीमा लठ्ठ परेर बसिरहेका थिए ।
बेलुकीको समय रक्सीको बोतलसहित उषाको आगमनले उनलाई एकछिन दिन हो वा रात हो भनेर पत्तो भएन ।
दुई हातको नमस्ते खाने वित्तिकै उनले भने–“ओहो... उषा ! यतिबेला आयौ तिमी । के काम पर्यो त्यस्तो ?”
सोह्रवर्षे युवतीले जस्तो औंला टोक्दै उषाले भनि–“नआएर के गर्नु त ? मलाई छोडेर सबैलाई बढुवा गरिबक्स्यो हजुरले ! मैले पनि त अरुले जत्तिकै कामकाज गरेकी थिए‘ं । हजुरको सेवा गरेकी थिएं ।”
–“मैले तिमी काम गर्दिनौ भनेर भनेको छु र ?”
–“त्यसो भए किन मेरो मात्र बढुवा रोकियो त ?”
–“तिमीलाई त म धेरै बुद्धिमानी सम्झन्थे । तर तिम्रो कुरा सुनेर त मेरा सोचाइ झुठा रहेछन् जस्तो पो लाग्यो । मेरो लागि तिमी कहिल्यै टाढा हुन्छ्यौ र ? आजसम्म मैले तिमीलाई के के गरे, के के गरिन सोच न ।”
–“मैले पनि हजुरले केही गरिबक्सेन भनेर कहॉं भनेकी छु र ? बढुवा जस्तो कुरा रोकिएपछि दुःख त लागिहाल्छ नि हजुर !
रक्सीको घुट्को निल्दै हाकिमसाहेबले पुनः भन्न थाले –“ठीक छ । दुःख लाग्छ । यस्तो कुराले धेरैलाई दुःख लाग्छ । तर तिमी आफै सम्झ न, मैले किन गरिन भनेर । आजभन्दा झण्डै तीन,चार महिना अगाडि यही सोफासेटमा तिमी र म गफ गरिरहेको बेला अफिसको धु्रबबहादुरले देखेको थियो कि थिएन ? अब तिमी आफै भन, एउटा सानो स्टाफले तिम्रो र मेरो व्यक्तिगत कुराकानी एउटै सोफामा बसेर गरेको देख्छ भने उसले के भन्ठान्ला ?
तिम्रो पनि बढुवा भएको भए, अवश्य त्यसले तिम्रो–मेरो सम्बन्धलाई अफिसमा फुक्दै हिड्थ्यो । अनि अरु कर्मचारीले मलाई के भन्थे ? तिमीलाई के भन्थे ? भन त ! त्यसैले चार,पॉंच महिना चूप लागेर बस । म ध्रुबबहादुरलाई बाहिर सरुवा गर्ने पक्षमा छु । त्यसको सरुवा भएको केही दिनमै म तिम्रो बढुवा गराई दिउंला भयो अब?”
हाकिमसाहेबको तर्क सुनेर उषा झसङ्ग भई ।